Webhusaiti kuparara. Ndezvipi zvirimo zvekutumira network | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi, sezvo Europe yave kusvika masikati uye Latin America yakatanga kumuka, Dzakati wandei dzemawebhusaiti akanyanya kushanyirwa akasangana nenyaya dzekuita. Izvi zvaisanganisira masocial network senge Twitter, vhidhiyo kutepfenyura seTwich kana Vimeo, zvemukati zvinosangana seReddit, uye nhepfenyuro senge CNN kana The New York Times.
Mukati meyakavhurika sosi yenzvimbo, zvakakodzera kutaura FreeBSD, iko kugovera kutsva Rocky linux (Forogo yeCentOS yakagadzirwa nemuvambi wayo) uye yeMicrosoft inobata GitHub vhezheni yekudzora system. GitHub pamwe iri iro basa rinogashira akavhurika sosi mapurojekiti.
Iyo joke yakajairika pakati pevagadziri ndeyekuti, neStackOverflow pakati penzvimbo dzakakuvadzwa (mubvunzo wepurogiramu uye saiti yekupindura iyo maererano nemakuhwa munhu wese anoteedzera kodhi), vazhinji veboka nhasi vatora zororo.
1 Munhu ane mhosva yekuparara kwewebhusaiti
2 Ndezvipi zvemukati zvekutumira network (CDN)
Munhu ane mhosva yekuparara kwewebhusaiti
Vashanyi kunzvimbo dzakakanganiswa, kana vachiedza kudyidzana navo, vakasangana nekanganiso kero: "Kanganiso 503 Service haina kuwanikwa." Iyo nyaya yaive yakabatana nekubuda kwakabva kuFastly gore chikuva uye zvemukati zvekutumira network (CDN).
Kubva Kurumidza ivo vanonzi vari kusangana nekukanganiswa kwepasirese kune CDN sevhisi, zvichikonzera zvakakonzera madhivhosi akasiyana ekuita kumatunhu kuNorth America, South America, Europe, Asia / Pacific, South Africa, neIndia,
Iwo masevhisi akatanga kuomesa maminetsi makumi mashanu nemashanu mushure mekuzivisa kwekutanga kana uchibva nekukurumidza vakavimbisa wawana dambudziko uye wave kushanda pamhinduro.
Izvo zvakazotaurwa kuti dambudziko raive rave kumisikidzwa kwebasa kwakakanganisa kukanganisika kune "Points of Presence" yako. Mhinduro yacho yaive yekudzima iyo seti.
Ndezvipi zvemukati zvekutumira network (CDN)
IInternet ichiri chivakwa chekuvaka pamwe nekukanganisa kwezvose zviri panyama. Iko kumhanyisa kwekuwana yezviri mukati kunoonekwa nezvinhu zviviri: Kurema kwefaira uye nhambwe. Kugoverwa kweLinux inorema 1gb kunotora nekukurumidza kupfuura iyo inorema 2gb (Kana zvimwe zvinhu zvikasasiyana. Nenzira imwecheteyo, kana paine vashandisi vaviri vane imwechete yekubatanidza kumhanya, iyo iri munzvimbo nenzvimbo padyo neiyo yekutanga Server ( chero bedzi zvimwe zvinhu zvakafanana) zvichaitora nekukurumidza.
Iwe haugone kugara uchiita chimwe chinhu kudzikisa uremu hwako husina kuburitswa. Kunyanya, multimedia mafaira anomhanyisa njodzi yekukanganisa mhando. Naizvozvo, vanopa vanoshanda nechimwe chinhu, chinhambwe.
Tinodaidza zvemukati kutumira network (CDN) boka remaseva akagoverwa enharaunda anoshanda pamwechete kuti ape zvinokurumidza kuendesa zvirimo.
Uyezve, maCDN idziviriro inoshanda pakurwisa kwakawandisa kwecomputer senge kugoverwa kuramba basa (DDOS)
Iwo maseva ari chikamu cheCDN zvakabatanidzwa kune mumwe nemumwe uye zvinowanzo kuwanikwa kunzvimbo huru dzekubatanidza pakati pevapi vakasiyana veInternet kupa mukana kune traffic inotangira kubva kunetiweki dzakasiyana. Nenzira iyi, kumhanya kwekufamba pakati pe data kwakadzikira.
Izvo zvinofanirwa kuve pachena kuti maCDN masevhisi haasi webhu yekubatira sevhisi. Basa rayo ndere kungopa zvemukati zvine mukana wekumhanyisa wakakosha. Semuenzaniso, kana webhusaiti ikashandisa masystem akadai seBootstrap kana jQuery, kana Google font yakatarwa, webhu dhizaini haidi kuisa mafaira pane ino saiti. Ingo sanganisira chinongedzo kunzvimbo inoenderana.
Ehe saizvozvo pane zvakashata kune izvi. Iko kudhura kwakanyanya kwekuve nemaseva munzvimbo dzakakomberedza pasirese hakuwanikwe kune wese munhu. Ndokusaka yega yega masevhisi achida akawanda vatengi kuti vazvipe mari pachayo. Kana imwe yeaya masevhisi ichiderera, ndozvinoitawo yakawanda yeInternet.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Webhusaiti kuparara. Ndezvipi zvirimo zvekutumira network